Tranom-bakoka, Muzium Laman Padi, Rice Museum Museum - Langkawi
Asia Malezia Langkawi
Ny Museum of Rice
Adiresy: Jalan Pantai Cenang, Pantai Cenang, 07000 Langkawi, Kedah, Malezia
Tel: + 604-955-3225; + 604-735-1315
Faritra: 5,5 hektara
Ny Museum Laman Padi ao Malezia dia fikambanana ara-kolontsaina tsy manam-paharoa ao amin'ny firenena, izay novolavola tamin'ny Jona 1999. Ny toeram-pambolena manontolo ao amin'ny faritra Pantai Cenang ao amin'ny Nosy Langkawi dia manana hôkara 5.5.
Malaza amin'ireo orinasa goavam-be i Malaizia, tsy tsiambaratelo fa ny vary Maleziana no marika lehibe indrindra amin'ny sakafo, ny sisa dia ny endriny ihany. Noho izany, ny famoronana tranom-bakoka toy izany dia fotoan-tsarotra.
Ny tranombakoka dia natokana ho an'ireo izay manaja ny tantara, ny kolontsaina ary ny maha-zava-dehibe ny indostrian'ny fambolena vary ao Malezia, ary koa ho an'ny mpiasa tsotra izay miasa ny asan'ny indostrian'ny indostrian'ny indostria ao amin'ny firenena. Izy dia noforonina mba hampiroboroboana ny fampandrosoana ny fizahan-tany ara-tontolo iainana any amin'ny faritra ambanivohitra ao amin'ny nosy Langkawi.
Ny tranom-bakoka no iray monja any Malezia ary ny fahaefatra dia avy amin'ny komplemanona mitovy amin'izany any Japon , Alemana sy Filipina. Ny trano fanorenana tranobe misy rihana telo dia tsy mahazatra ary tsy mitovy amin'ny endrika efa mahazatra - bozaka goavambe maromaro no mifangaro (ny kitapo dia singa manokana amin'ny fanangonana sy fitaterana vary). Ao anatin'ny foto-tsakafon'ny vary dia voaravaka eto ny zava-drehetra: manomboka amin'ny vavahady sy ny mandamandimby mankany amin'ireo fefy eny an-dalambe.
Mba hahatakarana ny fomba ahafahan'ny fambolena varimbazaha dia fomba fanao mahavariana sy sarotra, ireo vahiny dia asaina hijery ireto manaraka ireto:
Tao an-jaridhàn'io trano io, dia natsipy vary ny vary. Mahaliana fa amin'ny fotoana iray dia afaka mahita ny dingana rehetra amin'ny fitomboany ianao. Amboary ny sahan'asan'ny zaridaina mahafatifaty, ary amin'ny toerana maro dia nandamina teknika samihafa - maoderina sy efa ela, izay nampiasaina nandritra ny dingan'ny fambolena vary.
Ao amin'ny faritry ny tranombakoka, ankoatra ny vary dia mbola mitombo ny hazo sy ny hazo madinika, ny voankazo sy zavamaniry fanafody, izay matetika no mihinana azy.
Ao amin'ny fananganana ny tranombakoka dia afaka mahita ireo fampiratiana ireo ianao:
Ny fampiroboroboana ny tranombakoka dia fitaovana sy fitaovana ahafahana manamboatra saha. Ny zavatra tena mahavariana - sary 8 metatra iray, izay mampiseho ny famokarana vary amin'ny vokatra. Manana 60 ny mpamorona avy any Korea Avaratra manerana ny lamba;
sehatra mahatalanjona iray amin'ny iray amin'ireo efitrano, mihodina manodidina ny axe. Misaotra noho ny hafetsen'ireo mpitsikilo ireo, mahita ny fahatsapan'ny ririnina mihetsiketsika ny mpitsidika;
Misy galerie an-trano izay ahitanao sary sy sary maro samihafa miresaka momba ny fivoaran'ny indostrian'ny vary any Malezia;
Ny mpitsidika dia afaka mahazo ny fampahalalana rehetra momba ny fitomboana ary hiezaka ny hiasa amin'ny famolavolana vary, ary koa mandray anjara amin'ny fizotran'ny fanodinana;
dia mifaly amin'ny safidy goavam-be iray ao amin'ny phyto-shop izay anamboarana menaka manitra amin'ny famokarana manokana;
Rehefa avy nandinika ny tanimbary ry zareo, dia misy fotoana tena tsara ahafahana miala sasatra sy miala ao amin'ny toeram-pisakafoanana, izay hanolorana fanafody fanasitranana Maleziana. Aorian'ny fitsaboana spa dia mendrika ny hitsidika ny trano fisakafoanana ary hanandrana karazan-tsakafo (mazava ho azy, avy amin'ny vary).
Ny fidirana ao amin'ny Museum Rice dia maimaimpoana, saingy tsy misy mpitari-dalana, ny fitsidihana ny tranombakoka dia tsy ho mahafinaritra loatra, ary tsy ho takatrao ny zava-tsarobidy rehetra sy ny tsipiriany rehetra. Saingy miaraka amin'ny fitsangatsanganana sy mpitari-dalana eto amin'ity toerana ity, afaka mandany ora maromaro tena mahaliana ianao. Ny fikarakarana amin'ny teny Anglisy dia azo baikoina ao amin'ny biraon'ny mozea eo amin'ny faritry ny toeram-pambolena. Misy safidy iray hafa - midira fotsiny amin'ny tarika mpandihy, raha hitanao ao amin'ny tranombakoka izy ireo .
Ny ora misokatra dia amin'ny 10:00 hatramin'ny 18:00 isan'andro, zoma 12 sy 14:30.
Ny tranom-bakoka dia tranom-bato avy any amoron - dranomasin'i Chenang ary 10 minitra. mandeha fiara avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Langkawi , noho izany dia tsy hiteraka olana izany. Misy safidy roa:
amin'ny fiara - manomboka amin'ny seranam-piaramanidina Avaratra-Atsimo mankany Alor Setar Utara;
tongotra - avy any amin'ny toerana any Pantai Chenang.
Tondra-drano 7 lavalava
Fomban'ny fampakaram-bady 2016 - inona ireo?
Toby sy aretim-po amin'ny zaza
Kitapo miloko - Master-class
Inona ny viriosy amin'ny solosaina, ny fametrahana sy ny fiarovana ny viriosy amin'ny solosaina
Cod miaraka amin'ny legioma, mofomamy ao anaty lafaoro
Tazan'ny kintana sy olo-malaza amin'ny aretina mitaiza
Alaska pollack ao amin'ny oven - recipe
Ahoana ny fomba hanasana ireo rindrina glossy?
Mpandrindra ny tsinay - soritr'aretina, antony sy fomba fitsaboana tsara indrindra
Ny tsindry avy amin'ny intracranial - ny soritr'aretina ao amin'ny zaza
Kodelak Broncho amin'ny thyme
9 zavatra kely mahasoa izay hahatonga ny fiainana ho mora kokoa
Fotoam-pivoriana an-daty lava lava
Hazo any anaty alika